By Fatiya Adam • Apr 6, 2020
Manni yaala Iowa Akka gabasanitti namni 3 dabalataan du’uu himan, waliigalatti nama 25 tuu du’ee.
Kutaa Iowa keessatti namni dhukuba coronavirus dabalataan qabaman 78 yoo ta’u walii galatti nama 946 gahanii jiru.
Magaala Woodburry County keessatti coronavirus kan qabame nama 9 gahee jira. Garuu magaaladhan kan akka northwest Iowa keessatti hagasilaa dhukubni kun akka hin argamin himani jiru.
Wiyxaatta bulchituun Kim Reynolds bisnaasni dabalataan akka cufamu taasiste, kan akka kaampii, booling alii, bakka itti taphatan fii kan akka moolidha.
By Fatiya Adam • Apr 1, 2020
Mani fayya Iowa akka jedheti dhukubni korona Virus kun qabataman harka 52 akka dabale himan, walii galati Korona Virus kan qabaman 549 gahani jiru.
Guyya harba namni 2 dabalataan du’u himame, namni du’e kun lachu nama umrii 81 oliiti.
Magalawaan Iowa 99 keessa magaala 60 kessatti dhukubni Korona Virus kun argamuun isaa himame.
Itti gaafataman mana fayya State akka jedhaniti namni 63 haakima jiraachun himame.
Magaalan Sioux City dhukuba kana akka hin babal’anef jecha raawi baaye fudhacha jiraachu isaani beekame.
By Fatiya Adam • Mar 31, 2020
Miseensonni lama muumee Democrati Iowa kaan ta’an itti gaafatamtu kutaa Iowa Kim Reynolds dhaan akka ummani manaa gad hin bane akka ajajdu gaafataniiruu. Sababnii isaa dhukubni karona virus Iowa kessati dabala dhufuu isaa irra kan ka’ee.
Oduu guyya har’a kutaa Iowa waa’ee dhukuba Korona virus
By Fatiya Adam • Mar 27, 2020
Oduu guyya har’a kutaa Iowa waa’ee dhukuba Korona virus irraa
Kutaa Iowa kesatti dutii 2 galmoyte jirti, sababa dhukuba karona virus tin. Kun walii galati kutaa Iowa keessa namni 3 du’uun isaa himameera.
Guyyaa jimaata manni haakima Iowa namni 56 dabalataan qabamuu himamee. Walii galatti namni dhukuba Kanaan qabame 235 gahaniiru. Namoota qorataman. keessa namooni 3,700 olta’an dhukuba kanarra bilisaa ta’uun himame.
Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa
By Fatiya Adam • Mar 26, 2020
Dukubni karona vayrasii kuta Iowa keessatti namaa haga 179 gahe jiraa.
Mana yalla kaa kutaa Iowa kessaa jiruu akaa jedhanitti, garaa namotaa 34 dabalataan dhukubaa karonaa kaan qormatamee qabamuu isanii ibsanii jiruu.
Bulchaan kuta Iowa Kim Reynolds, Kamisaa akkaa ibsanii bakkaa wajiraa isanii iraa, dhukubnii karonaa kunii kaan muldhatee lamafaa magalaa Sioux County tittii.
Kaan jalqabaa magallaa Monona County, hasawaa kamisaa kesatii akaa harbaa himametii.